Guddoomiyaha baarlamaanka oo ka hadlay weerarkii shalay kadhacay Muqdisho – Radio Daljir
Guddoomiyaha baarlamaanka oo ka hadlay weerarkii shalay kadhacay Muqdisho
Diseenbar 23, 2018 5:09 b 0
Guddoomiyaha baarlamaanka faderaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabduraxmaan ayaa ka hadlay weerarkii qaraxyada ee shalay lagu dilay dad gaaraya labaatan qof iyo dhaawaca afartan ruux oo kalle.
“Anigoo ku hadlaayo Magaceyga,kan guddoonka Golaha iyo sidoo kale kan Xildhibaanada Golaha Shacabka Waxaan cambaareynayaa dhacdooyinkii foosha xumaa ee Al-shabaab maanta ay ka geysteen Magaaladda Muqdisho gaar ahaan Agagaarka Theater-Qaranka ,dadkii ku geeriyooday Illaahey naxriistiisa haka waraabiyo kuwii dhaawacmayna Caafimaad deg deg ah Allaha ha siiyo dhammaanteenana samir iyo iimaan Allaha ha naga wada siiyo.
Waxaa uu u mahadceliyay ciidamada ammaanka.
“Waxaan u mahad celinayaa qeybaha kala duwan ee Ciidanka ammnaanka Qaranka oo u taagan difaaca sharafka iyo karaamada dadka Soomaaliyeed iyo fashilinta dhagaraha Al-shabaab, waxaana intaasi uu ku daray.
“Waxaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay la shaqeeyaan oo ay garabkooda istaagaan Ciidanka ammaanka si looga adkaado dagaalamayaasha Shabaab ee fikradaha shisheeye ku shaqeeya mar walbana u taagan daadinta dhiiga shacabka Soomaaliyeed.